တရုတ်ဂွမ်ဒေါင်း Jinxin Machinery - HPC စီးရီးမှာ Automatic Hydraulic ဖလားစက် Making
ASPII စီးရီးပလတ်စတစ်စာရွက် Extruder
HPC စီးရီးမှာ Automatic Hydraulic ဖလားစက် Making
YB စီးရီးအော့ဖ်ဆက်က Surface ပုံနှိပ်စက်ကွေး
စက်ဖွဲ့စည်းခြင်း XC အပြည့်အဝမှာ Automatic High-Speed ​​ကိုဖုန်စုပ်
ဆိပ်ကမ်း: Ningbo သို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်း
Mode ကို / Parameter HPC-660 HPC-700 HPC-720 HPC-750
ရရှိနိုင်ပါပစ္စည်း PP, PE, PET, တင်ပါး, GPPS
ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဧရိယာ (မီလီမီတာ) 650 × 320 700 × 350 720 × 450 750 × 500
ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်အနက် (မီလီမီတာ) 120/180 120/180 120/180 120/180
ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်မြန်နှုန်း (သံသရာ / မိနစ်) 20-35 20-35 20-35 20-35
Max.width (မီလီမီတာ) 660 700 720 750
အထူ (မီလီမီတာ) 0.3-2.0 0.3-2.0 0.3-2.0 0.3-2.0
မြေတပြင်လုံးစက် (KW) ၏ပါဝါကို ≤45 ≤50 ≤55 ≤65
Air ကို, လေလွ (MPA) 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
ရေ, လေလွ (m3 / ဇ) ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.6
Dimension (မီလီမီတာ) 5500x2300x2400 5800x2500x2600 6200x2800x2600 7200x2800x2600
ထိုကဲ့သို့သောခွက်များ, သေတ္တာများနှင့်ဖလားအဖြစ်ထုပ်ပိုးကွန်တိန်နာ Thermoforming ။ ထိုသို့သောဒါပေါ်မှာနို့ခွက်များ, ဂျယ်လီခွက်များ, ရေခဲမုန့်ခွက်များ, One-ချွတ်ခွက်များ, ခေါက်ဆွဲခြောက်ဖလား, အမြန်အစားအစာသေတ္တာများ, အစားအစာသေတ္တာများနှင့်အမျှ။
1. အဆိုပါစက်ပစ္စည်းများ, တည်ငြိမ်ပြေး, အသေးစားဆူညံသံ, ကောင်းသောမှိုသော့ခတ်နိုင်စွမ်းထုတ်လုပ်ရန်ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားသည့်စနစ်ချမှတ်။
2. လြှပျစစျ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားပေါင်းစည်းမှု, PLC ထိန်းချုပ်မှုမြင့်မားတိကျစွာကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း။
3. လုံးဝအလိုအလျှောက်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ထုတ်လုပ်မှုမြန်နှုန်း။ ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ပေးဖို့ကွဲပြားခြားနားသောမှိုတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်။
4. လျှပ်စစ်နှင့် pneumatic fittings ၏တင်သွင်းကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်, တည်ငြိမ်ပြေး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးနှင့်ရှည်သောအသက်ပေးရန်။
5. တစ်ခုလုံးစက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်တဦးတည်းမှိုထိုကဲ့သို့သောအအေး, ပေးခြင်းကိုနှိပ်ဖွဲ့စည်း, ဖြတ်တောက်အဖြစ်အားလုံး functions များ, ရှိပြီးထုတ်ကုန်မှုတ်ပြီးလေ၏။ ချောထုတ်ကုန်များ၏က Short ဖြစ်စဉ်ကို, အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်အမျိုးသားရေးသန့်ရှင်းရေးစံတွေ့ဆုံရန်။
6. စက် PP, PE, PET, တင်ပါး, GPPS နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဒါပေါ်မှာခွက်, box ကိုပန်းကန်နှင့်ကဲ့သို့သောအခြားပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ဘို့လျောက်ပတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဒါပေါ်, နို့ခွက်, ဂျယ်လီခွက်, ရေခဲမုန့်ခွက်, One-ချွတ်ခွက်, ခေါက်ဆွဲခြောက်ပန်းကန်, အမြန်အစားအစာ box ကိုအစားအစာသေတ္တာနှင့်။
ယခင်: HPC-660 အလိုအလျောက် Jelly ဖလားဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် stack စက်
နောက်တစ်ခု: RCX စီးရီးမှာ Automatic Cam ဖလားစက် Making
စက် Making အပြည့်အဝမှာ Automatic ဖလား
Hydraulic ဖလားစက် Making
PP ဖလားစက် Making
SERVO-720 အလိုအလျောက် Servo ဖလားစက် Making
HPC -860 အလိုအလျောက် Hydraulic ဖလားစက် Making
ပန်းအိုးသည် HPC-720 အလိုအလျောက် Hydraulic စက်
စာရွက် Extrusion ၏ ASPII110 / RCX700 ပေါင်းစည်းရေး ...
စက်ပြုလုပ်ခြင်း RCX-700 အလိုအလျောက်စောင်း-မှိုဖလား
RCX စီးရီးမှာ Automatic Cam ဖလားစက် Making
ဖက်စ်: + 86-754-82484802
E-mail ကို: jxst@jxst.cn
Add: JINXIN စက်မှုဇုံ, HuaXinCheng, ChaoShan လမ်း, Shantou စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်